Kwayedza Mapeji Ekumhara - Chirongwa cheKugadzira
China, Gunyana 6, 2012 China, Gunyana 6, 2012 Douglas Karr
Imwe yeanonyanya kufarirwa infographics iyo yatakaona yakaburitswa needu tekinoroji vanotsigira,formstack , inonzi Landing Peji Dzakanakisisa Zviitiko.formstack iri nyore nyore kushandisa online fomu anovaka nekwanisi yekunyatso kuvaka kunze kwenzvimbo mapeji mune imwechete mhinduro.
Iyo Blueprint Yeiyo Inogona Kuedzwa Inotarisa Peji Peji: Mapeji anomhara anoumbwa neboka rezvinhu zvinotsanangurwa. Zvivakwa zvekuvakirwa pazasi zvinogona kushandiswa senge gwara kana uchitsanangura uye nekugadzira yako yakakwana kumhara peji rako wega!
Ivo vanhu veKISSmetrics vakaparadzira peji rekumhara mune ino yakanaka infographic, ichikupa iwe nekuparara kwenzvimbo dzaunofanirwa kunge uchiedza kwadziri.
Tags: ab testkumhara pejikumhara peji dhizainikumhara peji kuyedzamultivariate kuyedza
Sep 6, 2012 na12:28 PM
Ndatenda nekugovera ruzivo rwakakura! Ini ndinoda kuona zvakatumirwa zvichibuda zvinhu zvekuyedza uye kuita kuti zvive nyore kune vatengesi kuita zvirinani.